Bisikileta mpitondra entana elektrika China: 15G Controller, kilometatra 80km, famatrarana max 300kg, orinasa mpamokatra kodiarana vacuum ary mpanamboatra | GUODA
Bisikileta enta-mavesatra elektrika: Controller 15G, kilometatra 80km, famatrarana max 300kg, kodiarana vacuum
Nentin'ny batterie 60V58Ah sy motera 1400W 10-inch, ny Ace Heavy-enta-mavesatra Cargo Bisikileta anay dia afaka manolotra dia 80 kilometatra miaraka amina entana 300 kilao ao aminy, miaraka amina kodiarana Vaccum 300-10. Mampiasa mpandrindra 15G izahay hiantohana ny traikefa tsara mitaingina anao. Ny bisikileta enta-mavesatra koa dia miaraka amina frein disc anoloana sy aoriana ary misy laharana telo + mivadika. Mandritra ny dia, ny mpitaingina fiara dia afaka mianatra ny angon-drakitra mifandraika amin'ny alàlan'ny metatra LED amin'ny bisikileta amin'ny fotoana rehetra.
Vaky kapila anoloana / aoriana
300-10 Tayar vacuum
Previous: GD-KB-B003: (Mainty) Bisikileta fandanjalanjana ankizy, bisikileta ankizy, Toybox, bisikileta mahafinaritra an'ny ankizy
Manaraka: Factory ho an'i Sina mandrakizay bisikileta bisikileta an-dalambe bisikileta amin'ny bisikileta ho an'ny tanora
Ny bisikileta mitondra entana elektrika, antsoina koa hoe bisikileta mpitatitra herinaratra, no SUV an'ny tontolon'ny bisikileta satria izy ireo no karazana bisikileta mifanentana tsara amin'ny fampitaovana bisikileta elektrika. Ny herinaratra dia mampitombo ny karama sy ny isan'ireo bisikileta entana izay manampy amin'ny fitondrana entana mavesatra lavitra. Indrindra amin'ny faritra an-tanàn-dehibe, ny enta-mavesatra mandeha amin'ny herinaratra dia ahafahan'ny mpitondra bisikileta mitondra herinaratra mitondra entana betsaka, ary ny mpitondra bisikileta mpitondra entana hahatratra ireo toerana lavitra kokoa amin'ny fomba haingana sy maharitra.
Ny bisikileta enta-mavesatra elektrika dia matetika ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa, ohatra, ny fandefasana any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe, ny fivarotana sakafo amin'ny faritra fivezivezena an-tongotra, fanangonana fanodinana manodidina ny fametrahana lehibe sy fitaterana fitehirizana entana. Ny ezaka ara-teknika dia manatsara kokoa ny toetran'ny mpitaingin-tsoavaly, ny fahatsorana mafy ary ny fanafainganana haingana kokoa hahatratrarana ny vidiny ambany sy ny fanamorana ny fiasa amin'ny ambaratonga kely, mahatonga ny bisikileta mpitondra entana ho ilaina kokoa amin'ny halavirana lavitra na amin'ny faritra samihafa.
Ary toa ny bisikileta mpitondra entana mandeha amin'ny herinaratra dia tsy lafo vidy raha oharina amin'ny kamio amin'ny lafiny rehetra. Tsy mitabataba izy ireo. Mitsitsy angovo izy ireo nefa tsy mangetaheta vava lehibe matetika. Mora miovaova izy ireo eny an-dalana, indrindra rehefa tafiditra anaty fitohanan'ny fifamoivoizana ianao. Ny tena zava-dehibe dia tsy mampidi-doza izy ireo noho ny ankamaroan'ny fiara hafa
Bisikileta mitondra karatra elektrika
bisikileta mpitondra kodiarana matavy
Bisikileta enta-mavesatra vy